“Ma dhageysanin hadallada madaxweynaha kooxda Real Madrid, sababtoo ah Pogba…” – Tababare Solskjær – Gool FM
“Ma dhageysanin hadallada madaxweynaha kooxda Real Madrid, sababtoo ah Pogba…” – Tababare Solskjær
Dajiye September 22, 2019
(Manchester) 22 Sebt 2019. Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa xaqiijiyay in xiddiga reer France ee Paul Pogba uu sii joogi doono kooxda Manchester United, inkastoo madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez uu aad u xiiseenayo inuu la saxiixdo suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Magaca Paul Pogba ayaa lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxda Real Madrid suuqii xagaagii ee lasoo dhaafay, laakiin wuxuu ugu dambeyntii sii joogay garoonka Old Trafford.
Wrgeyska “The Guardian” ee dalka England ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu Ole Gunnar Solskjær bixiyay kahor ciyaarta galabta West Ham wuxuuna yiri:
“Ma dhageysanin ereyada madaxweynaha kooxda Real Madrid, Pogba wuxuu halkan siin doonaa wax walba uu awoodo, wuxuuna si buuxda u ixtiraamayaa qandaraaskiisa Manchester United”.
“Waxaan taasi ku aragnay mudadii uu dhaawacnaa Pogba, wuxuu u shaqeenayay sidii qof waalan oo kale, si uu taam u noqdo, sababtoo ah wuxuu doonayay inuu nala ciyaaro isla markaana uu saaxiibadiis caawiyo”.
“Wax wal-wal ah kama qabo, in mustaqbalka uu nala sii joogayo Pogba, hadii Real Madrid ay ku soo laabato saxiixa Pogba bisha Janaayo, kama walwali doono, waana la tacaali doonaa markale wararka xanta ah ee ku aadan bixitaankiisa, sidii aan sameynay xagiigii la soo dhaafay”.
“Pogba meelna aadi mayo, wuxuu ku faraxsan yahay halkan”.
“Waxaa jira dad doqomo ah” – Cristiano Ronaldo oo ku jees-jeesay Taageerayaasha Atletico Madrid
Drogba oo ka hadlay abaal-marinta Ballon d'Or 2019 & Xiddigaha ku guuleysan kara